रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ आज बाँडफाँड हुदै, तपाई लाई कति कित्ता पर्ला ? – Insurance Khabar
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ आज बाँडफाँड हुदै, तपाई लाई कति कित्ता पर्ला ?
प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०५:०४
काठमाडौँ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयर (आइपिओ) बाँडफाँड आज (शुक्रबार) हुने भएको छ । बाँडफाँडको समय भने तय भै-नसकेको बताईएको छ । तर दुवै कम्पनीका सम्वद्ध अधिकारीले भने आज नै शेयर बाँडफाँड हुने जानकारी दिए ।
रसुवागढी हाइड्रो पावरका प्रमुख माधव कोइरालले शेयर बाँडफाँड आजै हुने जानकारी दिए । यस्तै साञ्जेन हाइड्रो पावरको बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका सञ्चार अधिकृृत उद्धव सिल्वालले शेयर बाँडफाँड आजै गरिने जानकारी दिए । ￼ सेयर आवेदकको सम्पूर्ण लगत तथा विवरण संकलन लगायतका आवश्यक गृहकार्य सकिएकोले बाँडफाँडको तयारी गरिएको हो ।
दुवै कम्पनीले पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र दोस्रो चरणमा संस्थापक लगानीकर्ता समूहका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरेको थियो । सञ्चयकर्ताका लागि गत फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो । यस्तै, संस्थापक र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि यही चैत ५ देखि १३ गतेसम्म आवेदन दिने समय अवधि तोकिएको थियो । दुवै समूहका आवेदनकर्तालाई आज नै शेयर बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको छ ।
दुवै कम्पनीले माग गरेको तुलनामा करिब ६ गुणा बढी आवेदन परेको शेयर विक्री प्रबन्धकले जनाएका छन् । दुवै कम्पनीमा सञ्चयकर्ताका लागि २ अर्ब ४ करोड ५९ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको २ करोड ४ लाख ५९ हजार ५ सय ९५ कित्ता शेयर छुट्ट्याइएको थियो । ती आवेदनबाट ११ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । रसुवागढीमा १ लाख ८८ हजार र सान्जेनमा १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताले आवेदन दिएका थिए । यस आधारमा न्यूनतम ७० र बढीमा १०० कित्तासम्म शेयर पाउने अवस्था देखिएको छ । आवेदक सबैले पाउने गरी बाँडफाँडको तयारी भइरहेको रसुवागढी कम्पनीका प्रमुख कोइरालाले बताए । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको सेयर खरिद गर्न आवेदन दिएका हरेक सञ्चयकर्ताले करिब ४० कित्ता सेयर पाउने भएका छन् । मागभन्दा झन्डै ६ गुणा बढी आवेदन परेकाले सेयर संख्या कम भएको हो ।